musha UNITED STATES BioGRAPHY STORies US Hollywood Nyeredzi Arnold Schwarzenegger Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeGlobal Mtukudzi uyo anozivikanwa zvikuru nezita reNickname 'Arnie'. Nhoroondo yedu yeArnold Schwarzenegger Childhood pamwe ne Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Screen zvishoma-kuzivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva nezvemafirimu ake makuru, kutonga muviri uye zvematongerwo enyika. Zvisinei, vese vashandi vekufambisa maoko vanoona Arnold Schwarzenegger's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino tisingafambi mberi, ngatitangei.
Arnold Schwarzenegger Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Upenyu Hwekutanga
Arnold Schwarzenegger akaberekwa musi we 30th waJuly 1947 muThal, Austria. Akazvarwa kuna amai vake, Aurelia Jadrny Schwarzenegger (mukuru wemapurisa) uye baba, Gustav Schwarzenegger (uyewo mukuru wemapurisa).
Mucheche Arnold akafananidzirwa pamusoro apa akaberekerwa muimba yakasimba uye akakurira semunhu akazvipira muRoma Katurike. Vabereki vake vakanga vakanyanyisa mumatambudziko ose zvichienderana nechinangwa cheNazy. Nguva ipi zvayo paifamba zvisina kunaka kana ani zvake asina kuteerera, tsvimbo yakanga isina kuponeswa. Icho chaiva chiratidzo chakasimbisa kuti Young Arnold nevanin'ina vake vakarangwa chero pavakakanganisa. Kurerwa nevabereki veRoma Katurike kunovimbisa kuti vechiduku Annie uye nhengo yese yemhuri yake inofanirwa kuenda kuSvondo Masses zvakanaka akapfeka sezvinoonekwa mumufananidzo uri pasi apa.
Mufananidzo uri pazasi ndiArnold pa14 kuchikoro. Comportment yake yairatidza kuti aive akomba zvakadii kuchikoro. Iyo inoratidzira kugadzirwa kweimwe yakaunzwa nevanodzidzisa. Paaive achiri kuyaruka, Arnold aive akabatikana nedzidzo uye aive pamusoro peboka rake. Chikoro chakavhura hwindo remitambo yemakwikwi, mukana Young Arnold akashandisa mukana nekutamba nhabvu. Kudzidziswa kuve mutambi wenhabvu kwakamuona achitora danho rekuvandudza muviri raakazokudziridza nekuva anovaka muviri.
Chisarudzo chake chekuva muumbi-muviri hachina kuenda zvakanaka nevabereki vake avo vakanga vane zvisarudzo zvakasiyana zvemabasa kwaari. Kutanga, baba vake vaida kuti aite nzira yekutengesa mutemo, achida mwanakomana wake kuva mupurisa akafanana naye. Kune rumwe rutivi, amai vaArnold vaida mwanakomana wavo kuti adzidze kushambadzira kuchikoro.
Kunyange zvakadaro, Arnold akanga akatsunga kutora basa rake rekuvaka muviri kumatenga asingambofungidziki asina kubvumirwa nomubereki wake. Akange akagadzirirwawo zvakanaka nekuda kwezvaanoita.
Arnold Schwarzenegger Mwana weChidzidzo Plus Untold Biography Chokwadi: Simuka Mukurumbira
Arnold akaziva kuti chido chekuzvimiririra kubva kuvabereki vake zvichiita kuti aite zvisarudzo zvinokosha muupenyu hwake hwepakutanga. Kutanga kubva, akashanda muAustrian Army mu1965 kuti azadzise gore rimwe chete rebasa raidiwa panguva yevose vane 18 vane makore makumi maviri vokuAustria.
Munguva yebasa rake rehondo, akaenderera mberi nechido chake chekuvaka muviri uye akakunda Junior Mr. Europe yekuvakwa kwemakwikwi emakwikwi ayo akaita kuti azivikanwe. Akaenda AWOL mukuedza kuputsa mabasa ehondo asi akabatwa uye akatumirwa kujeri yeAustria jeri kwevhiki. Mushure mokunge mabasa ehondo apera, Arnold akapfuurira kumanikidzwa kwekukwikwidza kwakasiyana-siyana kweEurope kumakwikwi, mamwe aakatora wechipiri nevamwe, nzvimbo yekutanga.
Nenguva isipi, akazovhota semurume akakurumbira muEurope, izvo zvakamuita mukurumbira. Iko huru yakabva kwaari "Mr Universe" chinyorwa chaive chikwata chake kuAmerica-nyika yemukana. Arnold akaita rwendo rwokutanga rwendo rwake mu1966 achishandisa mukurumbira wekuvaka muviri senzira yekuenda kunzvimbo. Akadzidzawo kutaura Chirungu panguva ino.
Arnold apo muAmerica akaona mikana yakawanda mukushanda pane kuvaka muviri. Izvi zvakarambidza kutama kubva pakuvaka muviri kuvaka. Iye pakupedzisira akabudirira apo iye akasarudzwa kuti atambe basa raHercules muHercules's Hercules muNew York. Arnold mushure memafirimu ake ekutanga akatarisana nematambudziko ekudanwa kune mamwe mafirimu nekuda kwehukuru hwake. Mumashoko ake ...
"Zvakanga zvakaoma kwandiri pakutanga - ndakaudzwa nevashandi uye ndichikanda vanhu kuti muviri wangu wakanga uri 'weird' zvakare, kuti ndaive neshoko rakanyanyisa, uye kuti zita rangu rairema. Iwe unoritumidza, uye vakandiudza kuti ndaifanira kuchinja. Chaizvoizvo, kwose kwose kwandakatendeuka, ndakaudzwa kuti ndakanga ndisina chingaitika. "
Nzira chete yekubuda nayo Arnold yaiva mafirimu anovaka muviri aakashandisa pakucherechedza uye kuwedzera huwandu hwake muhutano hwekugadzira mifananidzo. Mukurumbira wake waive filimu-ne-uroyi epic Conan muBararian mu1982, iyo yaiva bhokisi-office hit. Izvi zvakateverwa neshure, Conan the Destroyer, muna 1984, kunyange zvazvo yakanga isiri kubudirira sezvakafanotangira. Commando (1985) akauya asi haana kumupa mukurumbira. Kunyange zvazvo, Total Recall (1990) yakagadzirirwa Schwarzenegger $ 10 mamiriyoni. Zvisinei, Schwarzenegger's peak commercial yaiva basa rake mufirimu Terminator 2: Zuva Rokutonga, iro raiva iyo firimu yakakwirira zvikuru ye1991.
Basa rake signature iro mumutambo "Terminator" rakamuita kuti ave nomukurumbira waakarota. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Arnold Schwarzenegger Mwana weChidzidzo Plus Untold Biography Chokwadi: Kubatana Kwokutanga Upenyu
Pakati pekupedzisira kwe1960 uye pakati pe1980s, Arnold aiva nehukama nehuwandu hwevanhukadzi hunonakidza kusanganisira vateereri, Eleanor Mondale naBrigitte Nielsen, mutumbi wemiti, Kellie Everts uye munyori Barbara Baker. Aya ndiwo mashomanana ehupenyu hunokosha Arnold aive nesimba.
Arnold Schwarzenegger Mwana weChidzidzo Plus Untold Biography Chokwadi: Kuroora naMaria Shriver
Arnold akazoroorwa neAmerican Journalist uye muzukuru wavo kuva mutungamiri weAmerica, John F. Kennedy Maria Shriver Musi we 26th yaApril 1986.
Kubatana kwavo kwakakomborerwa nevana vana vose vakazvarwa muLos Angeles. Vanosanganisira Catherine Eunice Schwarzenegger (akazvarwa muna December 13, 1989), Christina Maria Aurelia Schwarzenegger (akaberekwa muna July 23, 1991), Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger (akazvarwa muna September 18, 1993), naChristopher Sargent Shriver Schwarzenegger (akazvarwa muna September 27, 1997).
Arnold Schwarzenegger Mwana weChidzidzo Plus Untold Biography Chokwadi: Kuparara Kwemhuri
Musi waMay 9, 2011, Shriver naSchwarzenegger vakapedza ukama hwavo mushure memakore emakore ekuroorana, naShiriver mudzimai wake achibuda kunze kweBrentwood mansion. Kunyangwe pave nekuve nemishumo yekuparadzanisa pakati pemudzimai kubva ku25.
Arnold aiva nechinangwa chekukonzera kukwikwidza sezvo achibvuma kuva nehukama neimba yavo, Mildred Baena uyo akamuberekera mwanakomana, Joseph.
Arnold akati akasvika pakuziva nezvekubereka mwanakomana naMildred apo mwana wacho akakura ndokutanga kutarisa saiye. Kutarisa Arnold uye mwanakomana wake Joseph vaizoita kuti ubvume kuti zvirokwazvo, baba-mwanakomana zvakafanana chaizvoizvo zvinokonzerwa nezvinetso zvemuchato.
Mushure mokurambana, akatora mutoro wakakwana wemwana. Zvisinei, anotaura kuti achiri kutoita kuti kuparadzana kwemitemo kusunge sezvo asina kubvisa mapepa okurambana akaiswa nomudzimai wake 7 makore akapfuura.
Arnold Schwarzenegger Mwana weChidzidzo Plus Untold Biography Chokwadi: Upenyu hweMhuri
Arnold akakurira mumhuri yeKaturike yakatsigira chirango. Tinokupa tsanangudzo pfupi yemhuri yemhuri yake.
Baba: Baba vaArnold, Gustav Schwarzenegger akaberekwa pane gumi nemavirith yaAugust 1907. Gustav akafananidzirwa pasi aiva nekutenda kuti Arnold akanga asiri mwanakomana wake chaiye uye aizofarira mwanakomana wake mukuru Meinhard pamusoro pemwanakomana wake muduku.
Akazvipira nokuzvipira naNazy Party mu1938 ndokushumira Germany muHondo Yenyika II sepurisa remauto. Mushure mehondo, akaendeswa ku Weiz, Austria apo akashanda semukuru wemapurisa kusvikira afa. Gustav akabudiswa kubva muuto mu1943 sezvaakabata malaria. Arnold haana kuenda kumariro ababa vake. Mukubvunzurudzwa kwa Fortune mu2004, akataura kuti kushungurudzwa kwevana pamaoko ababa vake yaiva chikonzero chekusapinda pamariro.
Panguva yekufa kwababa vake, iye akanga ari muAmerica kudura "Pumping Iron." Yake-musikana, Barbara Baker, akashamisika kuti akaendesa kufa kwababa vake pasina chero manzwiro.
Arnold anoziva kukosha kwekuremekedza kunyanya sekune mhuri yake. Paakanga achiita huru muAmerica, akatsunga kuchengetedza zita rake remhuri. Nokudaro akatsvaga mabasa ehofisi yekutsvakurudza, [Simon Wiesenthal Center] kutarisa muzvinyorwa zvebaba vake zvehondo. Zviwanikwa zvekutsvakurudza zvakaratidza kuti baba vake vakanga vasina kubatana nehutsinye hwakasarudzwa nehutongi hweNazi neSouth (Sturmabteilung) avo vane hukama hwaakachengeta asati afa.
Amai: Amai Arnold, Aurelia Jadrny Schwarzenegger akaberekwa pa 29th zuva raJuly 1922.
Akaroorwa nababa vaArnold pa 5th yaOctober 1945 ndokubereka vanakomana vaviri, Arnold nemukuru wake Meinhard. Arnold aiva muukama hwakanaka naamai vake uye akaramba achikurukura naye kusvikira afa.
Amai vake vakafa nekurwadziwa kwemoyo pa 2nd musi waAugust 1998 paaishanyira guva romurume wake uye naizvozvo, akavigwa pedyo naye.
Sibling: Arnold aingova nemukoma mukuru, Meinhard Schwarzenegger. Meinhard (akafananidzirwa pasi apa) akafira mutsaona yemugwagwa gore risati rasvika baba vake uye akasiya mwana wake wekare 3 ane makore Patrick shure.
Arnold mushure mekufa kwehanzvadzi yake akatarisira mwanakomana wake Patrick. Akabhadhara dzidzo yake uye akamubatsira kuti atame kuAmerica. Arnold haana kumbotaura pamusoro pehanzvadzi yake asati afa. Uyewo haana kuenda kumuviga wake.
Zvapiwa Arnold anozivikanwa iye zvino mamiriro ezvinhu, zvingashamisa kuziva kuti akanga asiri baba vake vaaida. Baba vake, Gustav aida chaizvo mwanakomana wake wedangwe, Meinhard. Chero chipi nechipi rudo rwebaba Arnold akashaya kubva kuna baba vake, akachiita muna amai vake. Icho chaiva chisungo chakaenderera mberi kusvika pakufa kwake.
Arnold Schwarzenegger Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Basa rekuvaka muviri
Izvo hazvina kukodzera kuti Arnold aive nenguva dzakanakisisa nekugadzira muviri. Iye zvino tinokupai chokwadi chisingaverengeki pamusoro pomuviri wake wekuvaka muviri.
Kutsunga kwake uye chido chemutambo uyu vakamuona achikunda vashanu VaMutumbi. Akava muduku kuna vose vakamboti zita racho riri muzera re20. Akaenderera mberi kukunda zita racho zvakare katatu.
Vabereki vake vakanga vachitya kuti akanga achiita gay, sezvo akanga avhara rusvingo rwake nemapepa evanhu vane mafuta.
Kunyange zvazvo Arnold akabvuma kushandisa steroid pavakanga vari pamutemo, akatsanangura kuti steroid idzi dzakatorwa chete kuti dzirambe dzichikura musimba, kwete musimba kukura.
Paaidzidzira mune zvekurovedza muviri, akaona kuti muviri wake wepamusoro wakanga uchikura zvakanaka asi makumbo ake uye mhuru dzenzombe dzakanga dzakatetepa. Kuti azvikurudzire iye aizodzvora mabheji ake kusvika pahudyu ndokufamba-famba saizvozvo. Vanhu vaigona kuseka murume uyo ane huku yemakumbo uye pakupedzisira yakashanda.
Arnold Schwarzenegger Mwana weChidzidzo Plus Untold Biography Chokwadi: Movie Facts
ake "Conan Muparadzi" chakanga chiri kukundikana uye izvi zvakamukurudzira kuti arambe zvese zvinyorwa zvemafirimu ake akadai se "Commando "," Predator "," Total Recall ", uye "Ichokwadi Nhema". Ndizvo chete zvaakaita iye "The Terminator Series" uye "The Expendables Series."
Arnold pakutanga akanga asingatarisirwi akakodzera kuChese Chirangaridzo nokuti aifungidzirwawo semunhu. Zvisinei, akanga ari nokuda kwezvikonzero zvakanakisisa zvinozivikanwa kumuchimi wemagetsi, akapiwa basa.
Chimwe chiitiko chinofadza icho Arnold akataura chete nemashoko 58 muThe Terminator kuti awane madhora ake e10.
Akaramba mabasa akawanda ekutungamirira uye akazvidemba nokuti akashaya. "Dombo", "Mutsvene" uye "Pedzerana" kuva vashomanana pakati pavo.
Uyezve, Arnold akatora zvidzidzo zvakawanda zvemasango asati aita mafirimu eWeath Lies kuti aite kutamba zvakanaka naHarry Tasker.
Arnold Schwarzenegger Mwana weChidzidzo Plus Untold Biography Chokwadi: Accident Facts
Muna December 2001, akaputsa 6 nenyuchi mune kuputika kwemotokari kuLos Angeles. "Kwakanga kuri kurwadza, kunyanya kunorwadza kupfuura kuvhiyiwa kwemoyo," akadaro panguva iyoyo, achitaura nezvekuvhiya kwaaiva nayo mu1997 kuti atsive vheji yemwoyo.
Muna 2005, paakanga akatasva Harley Davidson nemwanakomana wake Patrick vakaona netsaona pedyo neimba yavo yeBrentwood. Akagamuchira 15 stitches kumiromo yake.
Akatora mabhii maviri-wheeler mu2006.
Arnold Schwarzenegger Mwana weChidzidzo Plus Untold Biography Chokwadi: Zvematongerwe Enyika
Pane imwe nguva muhupenyu hwake, akatora mutoro wekupa pamabasa kuvanhu. Nhanho yekutanga yaArnold yekushanda yaiva kupindira mune zvematongerwe enyika izvo zvisina mubvunzo zvakabudirira kwaari.
Mukusarudzwa kwake kwezvematongerwe enyika aiva sachigaro weMutungamiriri weMutungamiri pamusoro pePhysical Fitness neMitambo, nzvimbo yaaiita pakati pe1990 ne1993. Akazoshanda sachigaro weCalifornia Governor's Council pamusoro peFitness Fitness neMitambo pasi pekutungamirirwa kwaPete Wilson. Zvisinei, zuva guru rakauya. Pane 7th musi weChishanu 2003, Arnold akasarudzwa gavhuna weCalifornia uye akazosarudzwa patsva pa 7th yaNovember 2006.
Arnold akava mutambi wechipiri kuti asarudzwa seGavhuna weCalifornia. Wokutanga aiva Ronald Reagan.
Tinovonga nekuverenga Arnold Schwarzenegger Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At ChildhoodBiography, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!